PlayGalaxy Link: Egwuregwu Samsung gụgharia n'elu ikpo okwu | Gam akporosis
Edere Ferreno | | Egwuregwu gam akporo, Samsung
Ihe ngosi nke 10 Galaxy Note Izu gara aga kpuchiri akwụkwọ ọ bụla ọzọ Samsung hapụrụ anyị. Mana anyị nwere mmasị dị ukwuu nye ndị ọrụ. Ebe ọ bụ na n'etiti ha, akara Korea hapụrụ anyị PlayGalaxy Link, ya egwuregwu gụgharia n'elu ikpo okwu, nke a na-aga na-ulo oru ulo oru na September.
Anyị na-ahụ otú egwuregwu gụgharia ma ọ bụ nyiwe ụdị a ritere ọnụnọ, ya na Stadia n'isi. Samsung hapụrụ anyị PlayGalaxy Link ugbu a, nke dika ha onwe ha kwadoro, a ga-eweputa ya site na September, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdabere na ahịa n'echiche.
Ndị ọrụ nwere Galaxy Note 10 ga-ebu ụzọ nweta ụzọ. N'ihi PlayGalaxy Link ha ga-enwe ike nweta egwuregwu na kọmputa gị site na ekwentị gị. Ruo ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ ekpughebeghị ọtụtụ ihe banyere ọrụ a, ọ bụ ezie na ha hapụrụ anyị ugbu a vidiyo, ebe anyị nwere ike ịmụtakwu banyere ọrụ ya.
Iji mee ka ọ rụọ ọrụ, ụlọ ọrụ ahụ ga-enye anyị nbudata nke ngwa na gam akporo na Windows, nke na-enye ohere ịme mmekọrịta dị otú ahụ. Ekwuru na ha na Parsec rụkọtara ọnụ iji mepụta ikpo okwu nke na-apụ apụ maka oge nzaghachi ya belata mgbe anyị na-egwu egwu. Ọzọkwa, o yiri ka ọ ga-abụ ọrụ zuru oke n'efu.
Ọ bụ ezie na Samsung na-aga na-amachi PlayGalaxy Link a na ndị ọrụ zụrụ Galaxy Note 10. Mana a na-atụ anya na ka oge na-aga, na ọnwa ole na ole, ndakọrịta na ekwentị ndị ọzọ n'ime katalọgụ akara Korea ga-agbasawanye, mana enweghị aha, ụbọchị ma ọ bụ nkọwa maka ugbu a.
Ọzọkwa, na vidiyo anyị nwere ike ịhụ onye njikwa ga - eji na Galaxy Note 10 a, iji kpọọ PlayGalaxy Link. Ọ bụ onye na-ahụ maka akara site na ika a na-akpọ Glap, nke yiri ka o dakọtara na ikpo okwu Samsung a. N'ọnọdụ ọ bụla, anyị enweghị ọtụtụ nkọwa ịmara, yabụ ọ nwere ike ịbụ na izu ndị a anyị ga-amata karịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Egwuregwu PlayGalaxy: Egwuregwu Samsung na-agbasa na ikpo okwu na Septemba